यी ३ स्टार बलर : जसले आईपीएलमा सर्वाधिक छक्का दिए
By क्रिकेट पाटी	 On Mar 22, 2021
१. पीयूष चावला : यो सूचीको शीर्ष स्थानमा अनुभवी बलर पीयूस चावलाको नाम आउँछ । उनी यो सिजनको आईपीएल मुम्बई इण्डियन्सबाट खेल्दै छन् । चावलालाई सबैभन्दा बढी सफलता केकेआरबाट आईपीएल खेल्दै मिलेको छ ।
त्यस्तै, चावलाको नाममा आईपीएलमा खराब कीर्तिमान पनि रहेको छ । उनको नाममा आईपीएलमा सबैभन्दा बढी छक्का खाने कीर्तिमान रहेको छ । चावलाले आजसम्म १ सय ६४ म्याच खेल्दै १ सय ८१ छक्का दिइसकेका छन् ।
२. अमित मिश्रा : यो सूचीको दोेस्रो स्थानमा स्पिनर बलर अमित मिश्राको नाम आउँछ । पछिल्लो समय उनी दिल्लीबाट आईपीएल खेल्दै आइरहेका छन् । मिश्राको सुरुवात आईपीएल करियर एकदमै राम्रो रहेको थियो । २०१३ पछि उनको इकोनोमी रेट बढ्दै गयो ।
मिश्रा आईपीएल करियरकै सबैभन्दा बढी छक्का दिने दोस्रो बलर हुन् । उनले आजसम्म आफ्नो आईपीएल करियरमा १ सय ७१ छक्का खाइसकेका छन् । मिश्राले आफ्नो आईपीएल करियरमा १ सय ५० म्याच खेल्दै ७. ३४ को इकोनोमी रेटमा १ सय ६० विकेट आफ्नो नाममा गरेका छन् ।
मिश्राले पछिल्लो आईपीएल सिजनमा चोटका कारण धेरै म्याच खेल्न पाएका थिएनन् । उनले तीन म्याच खेल्दै ७.२० को इकोनोमी रेटमा कूल ३ विकेट लिएका थिए ।
३. रवीन्द्र जडेजा : यो सूचीको तेस्रो स्थानमा चेन्नई सुपर किंग्सका अलराण्डर रवीन्द्र जडेजाको नाम आउँछ । उनले बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङका कारण कयौँ पटक आफ्नो टिमलाई जित दिलाई सेकेका छन् । जडेजा आईपीएलमा सबैभन्दा बढी छक्का खाने बलरको सूचीको तेस्रो स्थानमा आउँछन् ।
जडेजाले आफ्नो आईपीएल करियरमा आजसम्म १ सय ८४ म्याच खेलेका छन् । जसक्रममा उनले ७.६७ को इकोनोमिमा १ सय १४ विकेट लिएका छन् । त्यस्तै, जडेजाले आजसम्म १ सय ४८ छक्का खाइसकेका छन् ।
उनको पछिल्लो आईपीएल सिजन त्यति राम्रो गएको थिएन । जडेजाले १४ म्याच खेल्दै ८.७५ को इकोनोमिमा मात्र ६ विकेट हात पारेका थिए ।
अमित मिश्रापीयूष चावलारवीन्द्र जडेजा